Home Security Camera WardenCam - reuse old phones 2.6.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.6.3 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား ေနအိမ္ & အိမ္ Home Security Camera WardenCam - reuse old phones
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သငျသညျမွမှေုနျ့ကိုတစ်နေရာရာမှာစုဆောင်းထားတဲ့အဟောင်းစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, ယခုသင်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိသည်။ WardenCam သင်ပယ်ရှင်းနေသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကိုနေအိမ်လုံခြုံရေးကင်မရာများသို့သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်မှာစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပြန်သွားလေ၏။ ဒါဟာကလေးတွေအိမ်မှာကျောင်းလျှင်, သင့်ကလေးစောင့်ကြည့်, သင့်အထုပ်ရောက်ရှိလာခဲ့လျှင်သင်ရှာဖွေကူညီပေးသည်, သို့မဟုတ်သင့်ခွေးနှင့်ကြောင်တစ်ကောင်မှတက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာထွက်ရှာပါ။
WardenCam Gingerbread ကဗားရှင်း 2.3 သို့မဟုတ်၎င်းထက်ကြီးပြေးမဆို Android ဖုန်းသို့မဟုတ် Tablet ကို ယူ. ကောင်းသောအသုံးပြုမှုရန်၎င်း၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အဆင့်မြင့်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံအာရုံခံကိရိယာများထားမည်။ နှစ်ခုဖုန်းများပေါ်တွင် WardenCam Install လုပ်ပါ။ One ကိုသင်၏သတ်မှတ်ထားသောတည်နေရာမှာသင့် Camera နှင့် Viewer ကိုအဖြစ်သင်နှင့်အတူအခြားတဦးတည်းယူပါ။ တူညီသော Google အကောင့်နဲ့ Log နှင့်ကပဲ! သငျသညျယခုသင့်ချစ်ရသူနဲ့ချိတ်ဆက်နေကြသည်။ WardenCam ရဲ့ရွေ့လျားမှု detection စနစ်အင်္ဂါရပ်နှင့် Google Drive ကိုနှင့် Dropbox ကိုပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူသငျသညျအမှုအရာပေါ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်မျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ငြိမ်သက်ပျော်မွေ့နိုင်ပါ။
- Wi-Fi, 3G, 4G နှင့် LTE ကိုအတူဘယ်နေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်
- ရွှေ့လျားထောက်လှမ်း & သတိပေးချက် (တွန်းအားပေးအကြောင်းကြားစာနှင့်အီးမေးလ်)
- (တိုက်ရိုက်သင်၏ Google Drive သို့မဟုတ် Dropbox မှ) အခမဲ့ cloud storage
- ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်ရပ်များ, သငျသညျလွဲချော်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်
- အားလုံးတဦးတည်းစနစ် Setup ကိုမျိုးစုံကင်မရာများ
- အားလုံးနေ့ညဉ့်မပြတ် streaming Live
- ထိုကင်မရာများမဆိုရန်ကြည့်ရှုသူ console ကနေနားထောင်ရန် Talk နဲ့
ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း 24/7 : သင်၏အားလပ်ချိန်မှာ devices များနှင့်အိတ်ကပ်ဖုန်းပေါ်မှာ WardenCam Install လုပ်ပါ။ "ကင်မရာ" & "ကြည့်ရှုသူ" အဖြစ်မဆို gmail အကောင့်နှင့်အတူဝင်ရောက်ပါ။ မီးဖိုချောင်, ကားဂိုဒေါင်, သင့်ရုံးခန်းထဲမှာအိမ်မှာအတိုး၏အအားလပ်ချိန်မှာ device ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုထားပါ။ အင်တာနက်နှင့်အတူဘယ်နေရာမှာမဆိုအိတ်ကပ်ဖုန်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက်စောင့်ကြည့်။
ရွေ့လျားမှုရှာကြည့် : အမှုအရာပေါ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်မျက်စိစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲစိတ်ငြိမ်သက်ခံစားပါ။ WardenCam အလိုအလျောက်ရွေ့လျားထောက်လှမ်းအချိန်ဇယားကိုပေးပါသည်။ တစ်ဦးရွေ့လျားမှုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတာနဲ့ကကျူးကျော်ကွာတွှေမှဥဩနှိုးဆော်သံစတင်သည်။ WardenCam လည်းသင်၏မိုးတိမ်သိုလှောင်မှုမှအဆိုကိုဗီဒီယိုကို upload လုပ်နိုင်အောင်ကင်မရာနှင့်ကြည့်ရှုသူနှစ်ဦးစလုံးပေါ်တွင်သင်၏ Google Drive ကိုနှင့် Dropbox ကိုလင့်ထားသည်။ သင်ပင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖို့ 24/7 မှတ်တမ်းတင် enable ပေမည်။ ရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရ!
ALERT လက်ခံရရှိ: တစ်ခုကျူးကျော်တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်သောအခါ, ကလေးတွေကျောင်းကနေအိမျရောက်ရှိမည်, သို့မဟုတ်သင့်သက်ကြီးရွယ်အိုဆွေမျိုးသားချင်းများကသူတို့နေ့ကအကြောင်းကိုရွေ့လျားနေကြသည်တစ်ဦးကိုချက်ချင်းတွန်းအားပေးသတိပေးချက်ရယူရန်။ မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုထဲကနေဖြစ်ရပ်အသံသွင်းပြန် Play ။
နှစ်လမ်းသွားအသံ : Talk ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များစောင့်ကြည့်နေစဉ်။ ကင်မရာကိရိယာအသံဖြင့်ပေးပို့ပါ။ ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်ရှေ့တော်၌အနှုတ်လက္ခဏာအရေးယူတားဆီး
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ google အကောင့်နဲ့ဝင်ရောက်ပါ။ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကွန်ရက်နှင့်အတူကြိုးစားပါ။ နေဆဲ logging ကိစ္စရပ်များကိုလည်းမရှိလြှငျ, support@wardencam360.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
သငျသညျ 24/7 ဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဘို့ app ကိုအသုံးပြုလိုရှိလျှင်, အမေရိကန်ဒေါ်လာ $ 5,99 များထဲမှတစ်ခုတည်းသောငွေပေးချေမှုနှင့်အတူပရီမီယံဗားရှင်း upgrade ပေးပါ။ အဘယ်သူမျှမကိုလစဉ်ကြေး။ အသေးစိတ်ကိုကြှနျုပျတို့၏ website wardencam360.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူကနေပိုပြီးအသုံးပြုသူအကြံပေးချက်များရဖို့ facebook ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ!
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones အား အခ်က္ျပပါ
kiensam စတိုး 21 34.62k
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Home Security Camera WardenCam - reuse old phones အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.6.3
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://wardencam360.com/legal.html
လက်မှတ် SHA1: 3B:54:66:90:17:1D:F6:56:40:16:1E:4E:6E:91:52:27:8F:EF:86:C4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Hongbin Li
အဖွဲ့အစည်း (O): LoveInvention Studio
နယ်မြေ (L): Suzhou
နိုင်ငံ (C): LI
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Jiangsu
Home Security Camera WardenCam - reuse old phones APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ